Oge Nwepu Onwe Onye nke Onwe - Kpọọ + 91-993.702.7574 maka ntinye akwụkwọ
Ụbọchị nchịkọta nke afọ Independence
Ọ bụghị oge na-aga ịzọpụta izu ụka a ma ọ bụrụ na ịnweghị akwụkwọ maka oge ezumike. Akwụkwọ naanị ụbọchị Independence Day ngwugwu na 10% ego naanị na Pebbles Peeji Na-eme njem N Njem. N'etiti ndị enyi gị na ezinụlọ gị, ị kwurịtala ebe niile ị nwere ike ịga - ma ọ bụ n'ime obodo ahụ, ma ọ bụ ọbụna njem ntụrụndụ gaa n'ebe ndị ọzọ dị nso. Ma n'agbata ogologo oge ọrụ na ihe ọ bụla ọzọ nke na-etinye oge na ume gị oge, n'ụzọ ụfọdụ ị naghị agbatị akwụkwọ ma ọ bụ mee ọtụtụ n'ime nnyocha. Atụla egwu, ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ ebe a. Oge nchịkọta onwe anyị nke Onwe anyị pụrụ iche ga-edozi ezumike gị. Na-eme ememe nke ụbọchị a nwere onwe gị site na imezu ọchịchọ gị ịga njem. Nweta 10% ego na nchịkọta niile e nyere. A na-ahazi oge nchịkọta oge ezumike onwe gị iji nye gị ahụmahụ kachasị na gị na ndị ị hụrụ n'anya. Anyị nile na-enwe njem njem kama n'ihi usoro egwu na ndụ na-arụ ọrụ mgbe ụfọdụ, anyị enweghị ike ịnụ ụtọ ngwụsị izu na ọtụtụ oge anyị na-ezere ya. Ma ụbọchị nke onwe a, ị nwere ike ịga ebe ndị kachasị amasị gị gburugburu n'akụkụ ụwa na ụwa. Buru n'uche na oge nnwere onwe ụbọchị ezumike bụ oge na-enye oge, ma ị ga-ejide ya ngwa ngwa o kwere mee. Ụbọchị nnwere onwe nke a nwere ike iso ndị gị hụrụ n'anya gaa njem kachasị amasị gị ma chọpụta ebe ị na-enweghị ebe ị na-emeghe n'akpa gị.
Họrọ site nchịkọta dị iche iche nke nchịkọta dị maka njem njem gị. Ọ bụrụ na ị kpebiebeghị ma ọ bụ chọọ ịhazi njem nlegharịgharị njem ma ọ bụ hotels na Day Independence Day ngwugwu, mgbe ahụ, anyị nwere ike ịgbanwe njem njem ahụ ma mee ka ezumike ezumike nke ahaziri gị, karịsịa maka gị. Anyị nwere ike gbanwee ihe njem njem ahụ dịka ọ bụla ị na-eme njem, mmefu ego, oge na ebe ndị njem nleta ị ga-achọ ịga. Ya mere, oge nnwere onwe a ịhọrọ nnwere onwe maka onwe gị. Nnwere onwe pụọ na nrụgide na usoro ihe egwu ma gaa maka njem njem nleta na Sand Pebbles Tour N Njem nke ga-enye gị ihe ncheta iji jiri ndụ gị dum kpọrọ ihe.
N'okpuru ebe a, ụfọdụ ndị ọbịa anyị na-enyocha ihe nyocha maka izu ụka a nke Independence:
Anavala Khandala Tour Package